Lazaro Cardenas, Esq. - I-NJ kunye ne-NY yeNdawo yeZindlu kunye nokuThengiswa, ukuKhuselwa kwaBantu abaKhuselayo kunye namaGqwetha okubhunga
ikhaya / Amalungu eQela/ Lazaro Cardenas, Esq.
Umanejala woQeqeshi beNdawo
[Imeyile ikhuselwe]	Umnxeba: 1-844-533-3367 Ext 13
Kutheni le nto ndaba ngumthengisi wezezindlu kunye nelinye ilizwe eligxile ekukhuseleni ikamva labantu namhlanje:
Okoko ndasungula ifemu, ndaye ndonwaba kukusebenza neentsapho ezininzi. Ndiwuthatha umsebenzi wam njengomcebisi onzulu kwaye ndizingca kakhulu ngokunceda iintsapho ezihamba ngeminyango yethu. Yonke imihla, ndizama ukuba yingcali engcono kunye nokunika ezinye iindlela kunye neengcebiso ezingcono kubaxumi bam, kwaye oku kuyandonwabisa kakhulu kwaye lelinye lawona mava anomvuzo ebomini bam.
Ndikhe ndanethamsanqa elihle lokusebenzisana nabantu ababini abakhulu abanokundincoma ngokwenene kwaye bobabini banesimilo esihle ngokuziphatha. Banomdla ngokulinganayo malunga neendawo zabo zokuziqhelanisa kwaye ekugqibeleni, oku kokona kubanceda kakhulu abathengi bethu. Ngokwesiqhelo imiba yabathengi bethu ichukumisa indawo ezimbini okanye ezingaphezulu kwendawo yethu yokuziqhelanisa kwaye sinesisombululo endlini ngaphandle kokubandakanya ezinye iifemu ziluncedo olukhulu kubathengi bethu. Elona xesha linomvuzo kakhulu kukubona iimpembelelo ezilungileyo endinazo kusapho luphela, nendlela isiphumo somsebenzi wam esikhokelela kubomi obungcono kwabaninzi.
Anditsho ukuba bendihlala ndiyazi ukuba ndizakuba ligqwetha, enyanisweni, indlela yam yokuya kwisikolo sezomthetho ayizange iqale kude emva kwexesha ebomini. Ndandiye kwikholeji nakwisikolo somthetho kwi-30 yam yakudala kunye nee-40 zokuqala. Uyabona, andinasikolo somthetho kumakhadi am, ndingunyana womlimi kunye nomenzi wasekhaya kwaye ukuba ngummeli akuyona into ebonakala ngathi inokwenzeka. Ukubuyela kwam ekholejini e-2002 injongo yam yayikukufumana isidanga sekholeji kwaye ndibe sisikhundla kwinkampani yethamsanqa. (Ngokwesiqhelo 'ukukhwela kwinqanaba lephupha lenkampani). Besele ndikumanyano lwehlabathi kangangeshumi leminyaka ngelo xesha, kwaye oku kwakubonakala ngathi yinto eyayisenziwa ngumntu wonke wonke umntu.
Nangona kunjalo, kwakamsinya emva kokuba ndigqibile isidanga sam sesidanga sokuqala ndagqiba kwelokuba ndiqhubeke nemfundo yam kwaye ndabona ukuba isidanga somthetho yinto endifuna ukuyilandela. Enkosi ngenkxaso endiyifumene nosapho lwam kunye nabanye babahlobo bam ababendinyanzele ukuba ndithathele ingqalelo kwisikolo sezomthetho. Ngokujonga emva, esi sesinye sezona zigqibo ezilungileyo zobomi bam kwaye kwandivumela ukuba ndiphume kwi-hamster wheel wheel kwaye ndilandele inkanuko yam yokwenyani.
Ngexesha lokufunda kwam kwikholeji, ndiye ndaqala ukuzibandakanya nemicimbi yezobulungisa kwezentlalontle. Ndibandakanye nombutho wokubhengeza obizwa ngokuba yiLatino Coalition yaseNew Jersey, endililungu layo, kwaye ndasebenza kwimiba enxulumene nokufudukela kwabantu namalungelo oluntu. Umsebenzi wam wale ntlangano yayikukuvula iliso kwaye, ngandlela thile, yayiyeyona nto yandikhuthaza ukuba ndiye kwisikolo sezomthetho. Ngexesha lomsebenzi wam wokuqala wokumela, ndaye ndafumanisa ukuba abantu abasemagunyeni bahlala besebenzisa kakubi isikhundla sabo ukuphatha abakhohlakeleyo nabangenamandla kubo. Ukuzama ukunika abo bantu ilizwi kunye nokubathethelela kungenxa yeso sizathu sokuba ndikonwabele ukuba ligqwetha.
Iindawo Zokuziqhelanisa noCore:
Intembelo kunye neNdawo yeZindlu
I-Wills, Amandla amaGqwetha kunye neeMiyalelo eziPhezulu zoNyango
Iingcebiso zaSimahla ziyafumaneka:
Indawo yokuhlala, iRhwebo, Ukuxelwa kwangaphambili, Reverse Mortgages, Ukuchithwa kwemali, Ukuphulukana noThintelo kunye neMicimbi yeChancery.
JD - Umthetho weSikolo iRutgers, INewark NJ
BA, Inzululwazi Yezopolitiko, I-Rutgers, kwiKholeji yeDyunivesithi
I-AA, uLawulo loShishino, KwiKholeji yoLuntu lwaseBreddale
Ukwamkelwa kweBhari kunye neeLayisensi
Wamkelwe kwiNew York State Bar
I-Federal District yaseJersey
UJason C. Bost, Esq. , MBA